को हुन् ला लिगामा कीर्तिमान बनाउने बार्सिलोनाका १६ वर्षे ठिटो?
नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ २९, २०७६, १३:०७
काठमाडौं- स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभर्देले शनिबार राति भ्यालेन्सियासँगको ला लिगा खेलमा १६ वर्षका अन्सु फातीमाथि विश्वास देखाउँदै सुरुवाती ११ मै खेलाए। त्यही विश्वासमा खरो उत्रिएका फातीले दोस्रो मिनेटमा नै गोल गरे।
यसअघि रियल बेटिसविरुद्ध बार्सिलोना डेब्यू गरेका फाती १९४१ मा भिसेन्ट मार्टिनेचपछि सबैभन्दा कम उमेरमा बार्सा डेब्यू गर्ने खेलाडीसमेत बनेका थिए। त्यसपछि ओसासुनाविरुद्धको खेलमा त उनले ५१ औँ मिनेटमा गोल नै गरेका थिए। जुन उनी मैदान पसेको छैठौँ मिनेट थियो।
भ्यालेन्सियाविरुद्ध दोस्रो मिनेटमा नै फ्रान्की डि योङको पासमा गोल गरेका उनले सातौँ मिनेटमा डि योङकै गोलका लागि उत्कृष्ट पास मिलाएका थिए। भ्यालेन्सियाविरुद्ध फाती र डि योङसँगै पिकेले एक गोल र लुइस स्वारेजले दुई गोल गरेका थिए। खेल बार्सिलोनाले ५–२ ले जित्यो।
ला लिगाका तीन खेलमा दुई गोल र एक असिस्ट गरेका फातीले आफ्नो खेलले सबैलाई चकित पारिसकेका छन्। उनी ला लिगाको इतिहासमै एकै खेलमा गोल र असिस्ट गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी पनि बनेका छन्।
लियोनल मेस्सी घाइते रहेको अवस्थामा सिनियर टिममा मौका पाएका फातीले आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। यसैले भ्यालेन्सियाविरुद्ध ६० औँ मिनेटमा फातीको स्थानमा लुइस स्वारेजलाई मैदान ल्याउँदा दर्शकले उनको सम्मानमा तालि बजाइरहेका थिए।
गएको सिजन भ्यालेन्सियाविरुद्धको खेल बार्सिलोनाका लागि सुखद थिएन। भ्यालेन्सियासँग ला लिगामा पहिलो खेल १–१ र दोस्रो खेल २–२ को बराबरी खेलेको बार्सिलोना कोपा डेल रे को फाइनलमा २–१ ले पराजित भएको थियो। तर, यो सिजनको पहिलो खेलमा लियोनल मेस्सी बाहिर रहेको र लुइस स्वारेज पनि पछिल्लो ३० मिनेट मात्रै मैदान रहेको खेलमा बार्सिलोनाले भ्यालेन्सियालाई हराउन सक्यो। जितसँगै बार्सिलोना चौथो स्थानमा उक्लिएको छ।
गएको सिजन चौथो नम्बरमा लिग सकाएर च्याम्पियन्स लिगमा छानिएको भ्यालेन्सियाले अहिले सिजनको सुरुतिरै प्रशिक्षक मार्सेलिनोलाई बर्खास्त गरेको थियो। नयाँ प्रशिक्षकका रुपमा आएका अल्बर्ट सेनाडेसका लागि पहिलो खेल सुखद हुन सकेन।
को हुन् फाती?
गिनी बिसाउमा जन्मिएका फाती आफ्नो बुबासँगै सानोमा नै स्पेन गएका हुन्। उनी २०१० देखि दुई वर्ष सेभियाको युवा टिममा रहे। २०१२ मा बार्सिलोना ‘बी’ टिममा सामेल भएका उनले सानो उमेरमा नै आफ्नो क्षमता देखाइरहेका छन्। उनी गएको जुलाईदेखि बार्सिलोनासँग २०२२ सम्मको सम्झौतामा छन्।
अन्सु फातीका बुबा बोरी फाती पनि पूर्वफुटबल खेलाडी हुन्। साथै उनका दुई दाइहरु ब्राइमा र मिग्वेल पनि फुटबल खेलाडी हुन्।
अन्सु फातीका बुबा स्पेन आउनुअघि कामको खोजीमा गिनि बिसाउबाट पोर्चुगल पुगेका थिए। जहाँ तल्लो डिभिजनका केही क्लबबाट उनले फुटबल पनि खेले। पोर्चुगलमा रहँदै सेभियामा आप्रवासीहरुका लागि राम्रो काम रहेको सुनेपछि उनी स्पेन पुगेका थिए। तर उनले कति समय त सेभिया नजिकैको मारिनालेडा सहरका फुटपाथमा मागेर समेत जिविका गर्नुपरेको थियो।
त्यही बेला सहरका मेयरलाई भेटेका उनले ड्राइभरको जागिर पाए। ड्राइभरको जागिर पाएपछि नै उनी हेरेरा सहरमा राम्ररी बस्न सकेका थिए। हेरेरामा नै अन्सु फातीको बाल्यकाल बितेको हो। जहाँ केही वर्ष सिडिएफ हेरेरा फुटबल क्लबमा फातीले फुटबल सिक्न पाए।
अहिले स्पेनिस फुटबल फेडेरेसन उनलाई स्पेनकै खेलाडी बनाउने प्रयत्नमा लागिरहेको छ। स्पेनबाट २०१९ को अक्टोबरमामा ब्राजिलमा हुने यु१७ विश्वकपमा खेलाउने प्रयत्न भइरहेका खबर आइरहेका छन्। अन्सुका बुबा पनि आफू गिनि बिसाउमा जन्मिएको भए पनि कर्म स्पेनमा नै भएकोले आफ्नै देश लाग्ने बताउँछन्।
बिएस ६ मापदण्डकाे फोर्ड एन्डेभर बजारमा आइतबार, असार २१, २०७७